Iindaba -Iikhrayitheriya zoyilo kunye nezakhono zokukhetha isanti kunye nomgca wemveliso yegrabile
Crusher abaza kuzisebenzisa
Ibhola yentsimbi ephezulu ye-chromium
Ukuphosa okuphezulu kwesinyithi se manganese
Iikhrayitheriya zoyilo kunye nezakhono zokukhetha izixhobo zesanti kunye nomgca wemveliso yegrabile
1. Uyilo loYilo loqhekeza umgca wokwenza isanti
Uyilo lweskim ikakhulu lubandakanya izigaba ezithathu: uyilo lwenkqubo, uyilo loyilo lwendiza kunye noyilo lokhetho lwezixhobo.
1.1 Inkqubo yoyilo
Ngaphantsi kwemeko yokuba iimfuno zenkqubo yokutya kunye nemveliso yokugqibela egqityiweyo icacile, indlela yenkqubo yokuqonda ukutyunyuzwa kunye nokuhluzwa kunokuba sisikimu esininzi. Inani kunye nohlobo lokukhethwa kwezixhobo ezikhethwe kwizikimu ezahlukeneyo zahlukile, ke indleko zokuqala zotyalo-mali kunye neendleko zokusebenza zexesha elizayo zokuphunyezwa kweskimu ziya kwahluka. Abaqulunqi, abatyali mali kunye nabaqhubi kufuneka baxoxe ngokupheleleyo kwaye basebenze, Ukulinganisa iingenelo kunye nezinto ezingalunganga zokumisela inkqubo ebhetele.
1.2 uyilo loyilo
Xa izixhobo eziphambili zichongiwe ngokwenkqubo yokuyila kokucwangciswa kwinqwelomoya ngokwendawo yomsebenzisi, le miba ilandelayo iya kuqwalaselwa:
(1) Umgama phakathi kwemigodi eluhlaza kunye nendawo yokungena yomtya, indawo yokungena kwindawo yokondla kunye nokuphakama kokuphakama, ubeko lwezixhobo, indawo yokugcina impahla kunye nendlela yokuphuma kwezinto;
(2) Phantsi kwemeko yokuhamba kwezinto ngokutyibilikayo, setwa njengabathumeli bebhanti abambalwa nabafutshane kangangoko kunokwenzeka;
(3) Ukudibana noyilo lwesitokhwe esiphakathi kunye nemveliso yokugcina impahla egqityiweyo yokusebenza kunye nokuthuthwa kwemveliso, kwaye uyisebenzise ngokupheleleyo indawo leyo;
(4) Ukusebenza kunye nokugcinwa koomatshini kunye nendawo yokusebenza kunye nonxibelelwano lolawulo lombane ziluncedo.
Emva kokuba uyilo lwenqwelomoya lugqityiwe, misela kuqala zonke izixhobo, kubandakanya izixhobo zothutho, izixhobo zokugcina, ulawulo lombane, njl.
1.3 Ukukhethwa kwezixhobo noyilo
Zintathu iindidi zezixhobo ezityikityiweyo zokutyumza kunye nokuhlola: ezisisigxina, ezineselfowuni (okanye isilingi) kunye neselfowuni. Ngokwemo yokuhamba, isikhululo sokutyhoboza esiphathwayo sahlulwe sohlobo lwamavili kunye nohlobo lokukhasa (ukuziqhubela ngokwakho). Ezi ntlobo zintathu zinokusetyenziswa ngokuzimeleyo okanye zixutywe. Umzekelo, iyunithi yokuqala yokutyunyuzwa iyiselfowuni, ekulungeleyo ukutyunyuzwa komxhesho okufuphi ukusuka kwimithombo emininzi yentsimbi, emva koko ithunyelwe kwindawo esisigxina ngebhanti yokuhambisa, ngelixa iiyunithi zasesekondari, ezityumkileyo kunye nezokuhlola zilungisiwe. Uhlobo lweyadi yegrabile luya kumiselwa ngokungqinelana nobuninzi bentshukumo yezixhobo ngexesha lokusebenza kweeyadi zegrabile. Izixhobo ezizihambelayo zilungele iimeko ezithile rhoqo. Ezona zibiza kakhulu luhlobo lwamavili kunye nohlobo lweselfowuni. Izibonelelo kukuba ezi ntlobo zezixhobo zinomjikelo omfutshane wofakelo, umsebenzi waseburhulumenteni omncinci kunye nokusebenza ngokukhawuleza.
2. Iikhrayitheriya zoyilo kunye nokuthelekiswa kwezixhobo zokutyunyuzwa kunye nokwenza umgca wesanti
Iiyadi ezahlukeneyo zesanti kunye negrabile zahluke kwaphela ngokodidi lwamatye, amandla onyango kunye neemfuno zesanti kunye neemveliso zegrabile. Ke ngoko, izixhobo zokutyhoboza kunye nokuhluza ezikhethiweyo kuyilo kwahlukile.
2.1 iyunithi yokuqala yokwaphula
(1) Okwangoku, kukho iintlobo ezintathu isityumzi ephambili: umhlathi isityumzi, counterattack isityumzi kunye umjikelo isityumzi.
Njengokophuka kokuqala, ukwaphuka kwempembelelo kusebenza kuphela kunyango lwelitye eliphakathi eliphakathi, njengelitye lekalika, ngenxa yoko umda wokusetyenziswa kwalo ulinganiselwe.
Elona cala liphezulu livumelekile lobungakanani becala lomhlathi wesityu esikhulu linokufikelela kwi-1m, eyeyona modeli isetyenzisiweyo isisiseko se-crusher. Ukhetho luxhomekeke kwizinto ezimbini. Okwesibini kukufumanisa ukuba ingaba amandla okulungisa ubungakanani bokukhutshwa kwezibuko phantsi kobungakanani bamasuntswana okukhutshwa ahlangabezana neemfuno zenkqubo.
(2) Nokuba feeder okanye bar screen icwangcisiwe phambi kokuba breaker yokuqala kuxhomekeke kwisikali umgca wemveliso. Izizathu zezi zilandelayo:
Ukusukela ukuba ukwaphuka kwemihlathi akuvunyelwanga ukuba kuqalwe ngokupheleleyo, kwaye isondli ingaqaliswa ngomthwalo, umondli ulawula ukondla kwinkqubo edlulileyo. Nje ukuba umondli uvalwe ngokungaqhelekanga, ukugcinwa kokuphuka kwemihlathi kunokuncitshiswa kwaye kubelula ukubuyela kwakhona;
② I-feeder itshintsha ukondliwa kweetroli kunye nezilayishi zokulahla ezihamba rhoqo ekutyeni okuqhubekayo kwi-crusher yomhlathi, kunciphisa ukuhla komthwalo womhlathi we-crusher, kwaye kufanelekile ekwandiseni ubomi benkonzo kumatshini;
Rhoqo, ubungakanani bokutya kweetraki abalingani, ngamanye amaxesha bukhulu kwaye ngamanye amaxesha buncinci. Xa kukho iziqwenga ezininzi ezinkulu zokondla, isityumzi somhlathi sinomthwalo omkhulu kwaye isantya esityumza sicotha. Ngokuchasene noko, kuyakhawuleza. Feeder uyakwazi ukunyenyisa isantya lokondla ukuze isityumzi umhlathi unako ukondla ngaphantsi xa umthwalo inkulu ngakumbi xa isantya otyumza ngokukhawuleza, nto leyo nayo efanelekileyo ekuphuculeni umthamo processing.
(3) Ngokubanzi, zine iindidi zabondli abanokukhetha kuzo: isikrini sebha, ukuhambisa ipleyiti yetyathanga, ukuhambisa ukungcangcazela kwemoto kunye ne-inertia vibration feeder. Umthuthi weplate yokuhambisa unzima kwaye uyabiza. Ukutya okuvumelekileyo kwesithuthi sokungcangcazela kweemoto kuncinci, kwaye akukho namnye kubo oxhotyiswe ngesixhobo sokujonga, ke umda wokusetyenziswa ulinganiselwe.
(4) I-feeder ye-inertial vibrating feeder ihlala ifakwa ngokuthe tye, kwaye ukuphakama okufunekayo kokuphantsi kungaphantsi kwescreen se-bar, ke kulungele ukusetyenziswa kwiyunithi yokuqhekeka ephambili.
(5) I-feed hopper ye-feeder ayihambelani kuphela ne-feeder, kodwa ikwachongwa yindlela yokondla yomsebenzisi. Indawo yokulahla inkunkuma ihlala isebenzisa ukondla okugqityiweyo, ngelixa umlayishi esebenzisa ukondla okungaphaya. Uyilo lwe-hopper yokutya yahlukile, kwaye umthamo osebenzayo we-feed hopper uya kuba ngama-1 ~ 1.5 amaxesha amakhulu kunaleyo yomzimba weloli yokutya.
2.2 zintathu iintlobo eziphambili zokutyunyuzwa kwesekondari kwiyunithi yokutyunyuzwa kwesekondari: ukutyunyuzwa okuhle, umhlathi ukutyhoboza, ikhowuni ityumza kunye nefuthe lokutyunyuzwa.
(1) Kwixesha elidlulileyo, ukutyunyuzwa kakuhle kwakuqhelekile kwisanti encinci naphakathi kunye neeyadi zegrabile. Ngenxa amandla amancinci processing kunye nenaliti ezininzi kunye nezinto iflake ekukhutsheni, iye ngokuthe ngcembe indawo yi cone watyumza kunye counterattack watyumza.
(2) Ngenxa yomlinganiso omkhulu otyumkileyo kunye nenaliti encinci kunye namasuntswana e-flake, ukuqhekeka kwefuthe kuye kwasetyenziswa kakhulu kwizimbiwa zentlabathi, ngakumbi kwiikwari zendlela yokuhamba kwabahambi kwiminyaka yakutshanje.
Le isityumzi impembelelo has ubuthathaka ezimbini ezibalulekileyo:
Okokuqala, phantsi amandla efanayo processing kunye nobukhulu yamasuntswana ezifanayo izinto ezingenayo neziphumayo, umthamo wayo ifakiwe iya kuba nkulu kunaleyo ikoni ityumza kunye nemihlathi ukutyumka, kuba ikakhulu yamkela impembelelo yokutyunyuzwa, kunye nefuthe kuqhushumbo kuya kubangela ilahleko enkulu amandla olungasebenziyo ngexesha Ukujikeleza ngesantya esiphezulu;
Okwesibini, ukunxiba kweendawo ezisengozini kuyakhawuleza. Phantsi kweemeko zonyango olufanayo, ngokufuthi ngaphezu kokuphindwe kathathu elifutshane kunaleyo ye-cone crusher kunye ne-jaw crusher, kwaye iindleko zokusebenza ziphezulu.
Ukongeza, inezinye iimpawu ezimbini: okokuqala, zininzi izinto ezintle ekukhutshweni, ezithandwayo kwezinye izicelo, ezinje ngokwenza isanti ngesandla, ngelixa iba yinto engeloncedo kwabanye; Okwesibini kukukhetha ukusebenza kwayo. Amandla ayo otyumkileyo anokulawulwa ngamandla okuhambisa, umgangatho weRotor kunye nesantya, ukuze ukhethe ukutyumza izinto ezithambileyo ngaphandle kokutyumza izinto ezilukhuni, ezilungele ukwahlulwa okulandelayo.
(3) Isigaxa isityumzi isityumzi yesibini esetyenziswa ngokubanzi entlabathini kunye iiyadi iiyadi ekhaya nakumazwe aphesheya. Ukubalulwa kwayo okwahlukileyo kunye neemilo ezahlukeneyo zomngxuma ezifanayo kunokuhlangabezana neemfuno zonyango olwahlukileyo, kufutshane kwiimfuno zenkqubo yokuhamba, kwaye inokusebenza okuzinzileyo kunye nobomi benkonzo ende yeendawo ezisengozini. Kukho ubuthathaka obubini bokuqhekeka kwekona:
Okokuqala, umsebenzi unzima kakhulu. Kungakhathaliseki ukuba luhlobo luni lwekhefu, ine-hydraulic kunye ne-lubrication system yokuhlengahlengisa imeko esebenzayo kunye nokupholisa ukufudumeza kwebheringi;
Okwesibini, xa kutyunyuzwa ezinye izinto (ezinje nge-metamorphic rock), ngenxa yokuqhekeka kwe-anisotropy yedwala ngokwalo, ipesenti yenaliti kunye neflake ekhutshiweyo iphezulu.
2.3 iyunithi yesaphuli ezintathu
Iinqununu ezintathu zokuqhekeka ezisetyenziswa rhoqo kukuqhekeka kwecone (uhlobo lwentloko emfutshane) kunye nokuqhekeka kwe-shaft ethe nkqo (umatshini wokwenza isanti).
(1) Xa umlinganiselo otyumkileyo iyonke isixhobo nokuchobozwa ezidityanisiweyo inkulu, inqanaba lesibini ityumza akunakufezekiswa, kwaye inqanaba lesithathu yokutyunyuzwa iya kuyilwa. Kuba isityumzi isigaxa, isityumzi yesibini ngokuqhelekileyo yamkela uhlobo kwisisu esezantsi, ngelixa isityumzi wesithathu isebenzisa uhlobo olufutshane intloko kwisisu.
(2) nkqo shaft impembelelo isityumzi (umatshini wokwenza isanti) ikhule ngokukhawuleza kwaye iye yaba sisixhobo eqhelekileyo ekwenzeni isanti, ekubumbeni kunye nokwaphuka ezintathu. Ngokuhlengahlengisa ubume be rotor, isantya esijikelezayo kunye namandla emoto, ubungakanani beeparitha zokukhupha zilawulwa. Ukuhamba kwamatye kugudile ngakumbi kwaye amandla okulungisa makhulu. Nkqo shaft impembelelo isityumzi ayisiyiyo kuphela uhlobo umatshini wokwenza isanti, kodwa iye yaba indlela yophuhliso ekutyunyuzweni tertiary nkqu yokutyunyuzwa yesibini.
I-2.4 yeyunithi yokuhlola kwangaphambili kunye neyunithi yokuvavanya imveliso egqityiweyo, kwinkqubo yokutyunyuzwa okuhleliweyo, umatshini wokuhlola wangaphambili ofakwe embindini weenkqubo zangaphambili nangasemva zokutyunyuzwa zinemisebenzi emibini:
Okokuqala, oko kunganciphisa amandla processing lwenkqubo yokutyunyuzwa elandelayo. Umatshini wokuhlola wangaphambi kwexesha wohlula izinto ezikhutshiweyo emva kokutyunyuzwa kwangaphambili kungaphantsi kobungakanani bamasuntswana okukhutshwa okutyumkileyo okulandelayo, ukunciphisa umlinganiso wamasuntswana acocekileyo ekukhutshweni okulandelayo kokutyunyuzwa;
Okwesibini, ezinye izinto ezinkulu zemveliso zinokufunyanwa ngokujonga. Kuba ixabiso lescreen sokungcangcazela lingaphantsi kunaleyo ityhitywayo, "ngakumbi ukuhla kwescreen kunye nokuqhekeka okuncinci" yindlela eqhelekileyo kuyilo. Imeko yokusebenza komatshini wokuhlola kwangaphambili ubonakaliswa bubungakanani be-particle enkulu yokutya kunye nokuhamba okukhulu, ngoko ke umnatha wesikrini nawo mkhulu, kwaye ukusebenza kovavanyo akufuneki ukuba kube phezulu kakhulu (kwaye akukho lula ukuvelisa ukuvaleka kwezinto). Ke ngoko, ukongeza kwiscreen eshukuma isikrini, ubukhulu obulinganayo bekrini kunye nesikrini sokujonga kwakhona sinokukhethwa. Isikrini semveliso egqityiweyo sisetyenziselwa ukujonga kunye nokuhlela izixhobo zemveliso kwikwari yesanti. Nokuba isikrini sihlambulukile okanye asichaphazeli ngokuthe ngqo umgangatho wemveliso yenkwali yesanti. Ngokubanzi, ukusebenza kokuvavanywa okungagungqiyo kungaphezulu kwe-90%, kwaye umnatha wesikrini usetelwe ngokobungakanani bamasuntswana ezinto ezigqityiweyo. Ukongeza kwiscreen eshukuma isikrini, i-triaxial elliptical screen nayo inokukhethwa.
2.5 iimveliso zentlabathi ezenziwe ngomatshini zecandelo lokucoca kufuneka zihlanjwe ngamanzi. Ukucocwa kwesanti kunye neemveliso zamatye kunokususa umhlaba oxubeneyo kunye nezinye izinto ezingafunekiyo, kwaye kulawule umxholo womgubo ocolekileyo. Isanti kunye namatye acociweyo xa zizonke zinokuphucula ikhonkrithi kwaye zinciphise namanzi. Ke ngoko, kuya kuba yinto eqhelekileyo ukusebenzisa iiyunithi zokucoca kwisanti nakwiiyadi zegrabile. Kukho iindlela ezimbini zokucoca isanti kunye nelitye: ukuba kuphela umgubo ocolekileyo kwizinto ezigqityiweyo ezilawulwayo, inokucocwa kwiscreen sokungcangcazela. Amanzi acociweyo angena entlabathini nakumatshini wokucoca amatye kunye nezinto ezintle zincinci kunesikrini esezantsi ukwahlula amanzi kunye nomgubo ocolekileyo entlabathini nakwilitye ukufumana isanti kunye nelitye elifunekayo. Amanzi kunye nomgubo ocoliweyo ziphinda zisetyenziswe emva kokuba zahlulwe ngentlenga kunye nokoma. Inokucocwa kwisanti nakwimatshini yokuhlamba amatye (okt hayi kwiscreen sokungcangcazela). Ngeli xesha, ngokwexabiso lomgubo ocolekileyo kwizinto ezigqityiweyo, isantya sesanti kunye nomatshini wokuhlamba amatye kunye nomthamo wamanzi ophuphumayo uya kulawulwa ukulawula isixa sokuhlamba kunye nokugcina umgubo ocolekileyo. Ukuba udongwe lubambelele esantini kwaye ilitye licociwe, udongwe olunamathele elityeni kufuneka lukhutshwe ngegrabile okanye isicoci selitye ngaphambi kokuba ilitye lityunyuzwe libe ngumgubo ocolekileyo, ukuze kuqinisekiswe umgangatho wesanti kunye nelitye emva Ukutyunyuzwa okulandelayo kunye nokuhluzwa. Olu hlobo lwezixhobo luhlala lusetwa ngaphambi kwescreen esingcangcazelayo, esicocekileyo ngaphambi kokuvavanywa.
Xa ulawula isixa sesanti kunye namatye okucoca kunye nokufumana umgubo ocolekileyo kangangoko kunokwenzeka, isanti yangaphandle kunye neyadi yelitye yamkela i-hydraulic classifier, eyongezwa phakathi kwescreen esingcangcazelayo kunye nesanti kunye nomatshini wokucoca amatye ukulungisa ulungelelwaniso lwentlabathi kunye yenze ifezekise imigangatho efanelekileyo. Ayifane isetyenziswe eTshayina kule meko. Indawo enkulu yesigaba sesithathu sombhobho kufuneka ilungiselelwe ukufumana isixa esikhulu somgubo ocoliweyo, okanye isixhobo esikhulu sokuphelisa amanzi emzimbeni kunye nezixhobo zokubuyisela kwimeko yesiqhelo kufuneka silungiselelwe, kungenjalo ukukhutshwa kwaso kuya kubangela ungcoliseko olukhulu kwindalo esingqongileyo.
I-2.6 ii-silos eziphakathi kunye nemveliso egqityiweyo yesitokhwe ziyisanti enkulu kunye neeyadi zegrabile. Ukuze kuphuculwe ireyithi yokusebenza, iisilos eziphakathi zihlala zibekwa phakathi kwe-crusher ephambili kunye ne-crusher yesibini. Iisilos eziphakathi zingagcina isixa esikhulu semathiriyeli, ukuze yonke inkqubo yohlulwe yangamacandelo angaphambili nangasemva. Izinto eziluncedo zesilo esiphakathi: 1) xa izixhobo ezikweli candelo langoku zingakwazi ukusebenza ngokwesiqhelo ngenxa yezizathu zemigodi, izizathu zothutho okanye izixhobo zokugcina, izixhobo ezikwicandelo elilandelayo zinokusebenza ngokwesiqhelo kwiiyure ezininzi okanye kwiintsuku ngokuxhomekeka kuluhlu lwe-intermediate isililo. 2) Ixesha lokusebenza linokwahlulwa. Ngokubanzi, ngenxa yebhloko enkulu yokutya emgodini kunye nokucaciswa kwesixhobo esikhulu, ixesha lokuvelisa alidingi ukuba libe lide kakhulu ukuhlangabezana nemveliso yemihla ngemihla, ngelixa izixhobo ezilandelayo azidingi kuqwalaselwa zikhulu kakhulu, kwaye yonke imihla ixesha lokuqalisa linokunyuswa. Ngale ndlela, ubukho besilo esiphakathi bunokwenza ukuba amacandelo angaphambili nangasemva amkele ixesha lokusebenza.
Zininzi iindlela zolwakhiwo lwesitokhwe esiphakathi. Uhlobo oluqhelekileyo kukusebenzisa umhlaba ukufumba izinto, ukumba imigca engaphantsi komhlaba, kunye nokusebenzisa ii-feeders kunye neebhanti zokuhambisa iimpahla ukuhambisa izinto phantsi komhlaba. Ngenxa yokuthintelwa komhlaba kunye notyalo-mali, imveliso egcinelwe i-1 ~ 2 yeentsuku ngokufanelekileyo. Umthamo wesitokhwe semveliso egqityiweyo yeenkcukacha ezahlukeneyo ziya kulingana nepesenti yeemveliso ezigqityiweyo kwimveliso iyonke. Uyilo lwesitokhwe semveliso esigqityiweyo sixhomekeke kwimowudi yemveliso egqityiweyo yomsebenzisi, enje ngeelayishi + yokulahla inkunkuma, eyahlukileyo kwibhanti yokuhambisa ngokubanzi ukuya kwiziko lokulayisha okanye ukulayisha umzila kaloliwe.
2.7 izixhobo zokulawula umbane
Ukuqhuba kwezixhobo ezityunyuziweyo nezokuhlola kuyahluka ngenxa yeentlobo ezahlukeneyo: isikhululo esityikityayo esizimeleyo samkela imo yokuqhuba kwenjini yedizili + isikhululo samanzi, oko kukuthi, injini ephambili iqhutywa ngqo yidizili, kunye nezinye izixhobo ezinje Isondli, ukungcangcazela kwescreen, ukuhambisa ibhanti kunye nendlela yokuhamba ziqhutywa ngombane, ezixhotyiswe ngezixhobo zolawulo zombane kule ndlela yokuqhuba. Ezi ndlela zilapha ngasentla zinokwamkelwa kwisikhululo sokutyumza ivili elihambahambayo, okanye indlela yokuhambisa umbane yeseti yomvelisi wedizili inokwamkelwa. Izixhobo ezidityanisiweyo okanye ezihambelanayo ezihambahambayo, ukongeza kwiseti yedizili, yamkela iigridi zombane.
Eyona nto ixhaphakileyo kuzo zonke iintlobo zezityumzi kukuba i-static inertia yamalungu ahambayo makhulu kakhulu, ke imoto yayo inendawo enkulu efakiweyo kunye nesiqalo esikhulu sangoku. Amazwe angaphandle ngokusisiseko amkela imowudi yokuqalisa ethambileyo ukunciphisa ifuthe kwigridi yamandla kunye nokukhusela imoto. Iseti yezixhobo ezidityanisiweyo ibandakanya iimoto ezingaphezulu kweshumi elinambini, amandla ombane kunye nolawulo lwangoku lweemoto ezibamba, isantya sokulawula isantya esiguqukayo sesondlo, njl.njl. lobushushu noxinzelelo kulawulo lwenkqubo yokutshintsha inkqubo ngaphambi nasemva komgca wonke, kufuneka yenziwe ngocwangciso lolawulo lwe-elektroniki.
Dongfang Industrial Park, santangpu Town, Shuangfeng County, kwiPhondo Hunan